menu ကို 1
နေအိမ်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒလှုပ်ရှားမှုများစွန့်စားမှုရေငုပ်Eco-ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဂေါက်သီးရိုက်SPA ကုမ္ပဏီဗဟိုANGTHONG ToursAngthong အတွက်ဟိုတယ်များအယုဒ္ဓယ Toursအယုဒ္ဓယအတွက်ဟိုတယ်များဘန်ကောက်ဘန်ကောက်ကဟိုတယ်Chachoengsao ToursCHAINAT Toursဟွာဟင်းခရီးသွားကန်ချနပူရီ Tourslopburi ToursNakhon Pathom ToursNAKHONNAYOK ToursNonthaburi ToursPATHUMTHANI ToursPHETCHABURI ToursPRACHUAPKHIRIKHAN ToursPranburi Tours မှရတ်ချာဘူရီ ToursSamut Sakhon ToursSAMUTPRAKAN ToursSamutsongkhram ToursSARABURI ToursSINGBURI ToursSUPHANBURI Toursထိုင်းချာ Am Tours မှအဘိဓါန် EasternCHANTHABURI ToursChonburi ToursPrachinburi Toursရယောင် ToursSAKAEO Toursကန် Toursမြောက်ကိုရီးယားကCHIANGRAI ToursKamphaengphet ToursLAMPANG ToursLAMPHUN ToursMAEHONGSON ToursNAKHONSAWAN ToursNan ToursPhayao ToursPHETCHABUN ToursPhichit ToursPHITSANULOK ToursPHRAE ToursSUKHOTHAI Toursတက်ခ် ToursUthaithani ခရီးသွားပြန်ကြားရေးUttaradit ခရီးသွားချင်းမိုင်ခရီးသွားလမ်းညွှန်Doi Inthanonမြောက်အမေရိက-အရှေ့အာရှAMNATCHAROEN ToursBURIRAM ToursCHAIYAPHUM ToursKALASIN ToursKHONKAEN ToursLOEI ToursMAHASARAKHAM ToursMUKDAHAN ToursNAKHONPANOM ToursNAKHONRATCHASIMA ToursNONGBUALAMPHU ToursNONGKHAI ToursROIET Tour တွင် Roi Et ခရီးသွားSAKON Nakhon Toursခက် Tour Si Sa Ket ခရီးသွားအကွံဉာဏျSurin ToursUBON ရာချာ Toursဥဒေါင်ထ ToursYASOTHON Toursတောင်ဘက်CHUMPHON ToursKRABI ToursNAKHONSITHAMMARAT ToursNarathiwat ToursPattani Toursဖန် ToursPHATTHALUNG Toursဖူးခက်ခရီးစဉ်ရနောင်း ToursSATUN ToursSongkhla ToursSURATTHANI ToursSITE ကို TourYala Tours
menu ကို 2
ကျေးဇူးပြုပြီးခဏစောင့်ပါ	Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan
အားဖြင့် admin ရဲ့ ဇွန်လ 25, 2017
Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan If we talk about the important temple of Thailand, များစွာသောလူ "Dawn ၏ဗိမာနျတျော" သို့မဟုတ်အပြည့်အဝနာမကိုအမှီ "Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan" သည်ဟုမထင်လိမ့်မယ်. တစ်ဦးကခမ်းနားဗိမာန်တော်ကို Chao Phraya မြစ်တလျှောက်တွင်တည်ရှိပြီး, အမြင့်ဆုံးစေတီတော်ကိုအဲဒီမှာရှိ (Phra ရမ်) ထိုင်းနိုင်ငံတွင်, နှင့်အယုဒ္ဓယနိုငျငံတျောသညျကာလ built-in ယူဆ. အတိတ်ကာလ Phra ရမ်၏အမြင့်အကြောင်းကိုခဲ့သည် 8 ဝါး. နောက်ပိုင်းတွင်, King Taksin the Great wishes to move…
ဆက်ဖတ်ရန် | No Comments Phra Nakhon Si အယုဒ္ဓယသမိုင်းဝင်ပန်းခြံ
အားဖြင့် admin ရဲ့ Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park It is one of the most important historical sites in the country. အဘယ်အရာကိုဤအရပျကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရှိပါတယ်? ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာကွပါစို့. The interesting historical places Ancient Palace or the Royal Palace was the residence of the king, တစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ငံရေးနှင့်လွှမ်းမိုးမှုများနေတဲ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်. အယုဒ္ဓယပထမဦးဆုံးသူ၏ဘုရင်မင်းမြတ်ဘုရင်ကဦး-Thong အားဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အခါ (1350-1373), သူသည်ဧရိယာထဲမှာနန်းတော်ကိုတည်ဆောက်, which is now…
ဆက်ဖတ်ရန် | No Comments Doi Suthep ဒါက Doi Suthep ဘုရားကျောင်းသို့မဟုတ် Wat Phra
အားဖြင့် admin ရဲ့ Doi Suthep Temple or “Wat Phra That Doi Suthep” Talking about famous temples and havealot of people go to worship the sacred. And always go to pay homage to blessings. The one temple that we can mention is Wat Phra That Doi Suthep. Wat Phra That Doi Suthep is an important temple in history. ထိုသို့အဖြစ်အားလုံးထိုင်းလူမျိုးတို့တွင်အများဆုံးရှိခိုး၏တဦးတည်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. And a…
ဆက်ဖတ်ရန် | No Comments Phra Kaew Wat
အားဖြင့် admin ရဲ့ ဇွန်လ 23, 2017
Wat Phra Kaew Wat Phra Sri Rattana Satsadaram or “Phra Kaew Wat” that the temple was built to house the Emerald Buddha, The area of temple is spacious. The reign of King Rama I was built along with the Grand Palace and the Rattanakosin Kingdom.It isatemple building within the precincts of the Grand Palace, following the Wat Phra Si Sanphet of Ayutthaya kingdom. This temple is located in the Grand Palace on the east…
ဆက်ဖတ်ရန် | ဟာ Off comments အပေါ် Phra Kaew Wat Pattaya Park Good For Kids
အားဖြင့် admin ရဲ့ Pattaya Park Good For Kids If we talk about amusement parks, the first place many people think of Dream World. နှင့်ပတ္တရားပန်းခြံသောအချိန်ကြာမြင့်စွာပတ္တရားအတွက်ဖွင့်လှစ်သောအပန်းဖြေဥယျာဉ်၏တဦးတည်းကိုမသိရကြသူများစွာသောလူရှိပါတယ်. အဆိုပါမျှော်စင်ပတ္တရား City နှင့် Jomtien သဲသောင်ပြင်များအကြားတည်ရှိသည်, များစွာသောအရပ်တို့ကိုကနေမြင်နိုင်အောင်. မျှော်စင်ရဲ့ထိပ်မှာ, ဧည့်သည်များပတ္တရား၏မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များကိုခံစားနိုင်ပါတယ်. Or…
ဆက်ဖတ်ရန် | ဟာ Off comments အပေါ် Pattaya Park Good For Kids ခရီးသွားဧည့်များအတွက် Koh LAN အများအပြားကမ်းခြေ
အားဖြင့် admin ရဲ့ ဇွန်လ 17, 2017
KOH LAN many beaches for tourists There are many attractions in Koh Lan and there are many beaches for tourists to visit. အကြောင်းခုနစျပါးကမ်းခြေလူကြိုက်များခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. လူကြိုက်အများဆုံးကမ်းခြေဖြစ်ပါသည် “ta Waen ရှိပါတယ်” အဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်များနှင့်လွယ်ကူစွာ. အခုတော့ Koh သည် Lan ၏လှပသောကမ်းခြေကိုသွား. Koh သည် Lan ကျွန်းပေါ်ကမ်းခြေဘာတွေလဲ? 1. Ta Waen Beach “Hat Ta Waen” Hat Ta Waen located in the north of the island….
ဆက်ဖတ်ရန် | ဟာ Off comments အပေါ် ခရီးသွားဧည့်များအတွက် Koh LAN အများအပြားကမ်းခြေ Rajapruek တော်ဝင်ပန်းခြံ, ချင်းမိုင်
အားဖြင့် admin ရဲ့ ဇွန်လ 10, 2017
Rajapruek တော်ဝင်ပန်းခြံ, Chiang Mai On holidays or may be the time for everyone go to rest from work. လူအတော်များများဟာပြည်နယ်မှသွားလာရန်ရွေးချယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လှပသောနေရာအရပ် sightseeing. များစွာသောလူသွားရောက်ကြည့်ရှုလိုနာမည်ကျော်နေရာများတစ်ခုမှာပန်းခြံဖြစ်ပါသည်. ယနေ့အချိန်တွင်, we will bring everyone to know. Rajapruek Royal Park or the same name Ratchaphruek Royal Memorial Park Created on the occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 60th Birthday on…
ဆက်ဖတ်ရန် | ဟာ Off comments အပေါ် Rajapruek တော်ဝင်ပန်းခြံ, ချင်းမိုင် 1234နောက်တစ်ခု » နောက်ဆုံး » စပွန်ဆာ
Floating Market က
ခရီးသွားလာမှု & အချိန်အား
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့များအတွက်မိုးလေဝသ27°အနည်းငယ်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးစိုစွတ်ခြင်း: 78%လေတိုက်: 2m/s SH ကို 31 • L ကို 25
OpenWeatherMap မှမိုးလေဝသ မကြာသေးမီခရီးသွားသ Post ကို (NEW!)	Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan
Phra Nakhon Si အယုဒ္ဓယသမိုင်းဝင်ပန်းခြံ
Doi Suthep ဒါက Doi Suthep ဘုရားကျောင်းသို့မဟုတ် Wat Phra
Phra Kaew Wat
ခရီးသွားဧည့်များအတွက် Koh LAN အများအပြားကမ်းခြေ
ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Tags: တိမ်တိုက်	ကပ္ပလီ
ဆူနာမီ	ဘာသာပြန်ချက် Edit ကိုဘာသာပြန်စာပေအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ထိပ်တန်းကံကြမ္မာရန်သင်၏အားလပ်ရက်များအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကခရီးသွားခွင့်အကြံဉာဏ် အားဖြင့် Thailandtriptour.com - မှပံ့ပိုးသည် ထိုင်း